အမြဲပျော်ရွှင်နေတဲ့ စုံတွဲဖြစ်နေဖို့ လိုအပ်တဲ့အချက်လေးတွေ
Thet Naing Swe (29/09/50025)
Relationship တစ်ခုတည်ဆောက်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်ဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ်ကို နှစ်ယောက်ဝေမျှပြီးရေးလိုက်တာပါပဲ။ ဝတ္ထုဆိုတဲ့သဘောအတိုင်း ကောင်းခန်းရှိမယ်၊ ရန်ဖြစ်တဲ့အခန်းရှိမယ်၊သတ်ကြချကြမယ်၊ ပြန်ချစ်ကြမယ်၊ ဗီလိန်လဲပါဦးမယ်၊ စသည်ဖြင့်ရှိတာပေါ့နော်။ ကိုယ်ပိုင်ဝတ္ထုအတူတူရေးကြတာချင်းအတူတူ ပျော်စရာဇာတ်သိမ်းနဲ့ ဝမ်းနည်းစရာဇာတ်သိမ်းဆိုပြီးရှိကြပါတယ်။ ပြဿနာတွေအပေါ် ဖြေရှင်းကြပုံခြင်းမတူတာကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့အလွဲလေးတွေကိုဒီဆောင်းပါးထဲမှာ နှင်းကဖော်ပြပေးသွားမှာပါ…
နှစ်ယောက်တစ်ဘဝနေသားကျဖို့ အဓိကအရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်က ‘ခံစားချက်ပါ’။ ဒါပေမဲ့ ပျော်ဖို့၊ မပျော်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးက ‘အကောင်းဘက်မြင်တတ်ခြင်း၊ မမြင်တတ်ခြင်းပါ’။ မတူညီတဲ့နေရာနှစ်ခုက လူနှစ်ယောက် ပေါင်းစပ်တာမို့ သူဘာလုပ်နေလဲ ကိုယ်မမြင်နိုင်တဲ့အချိန် ‘ယုံကြည်မှု’ ဆိုတဲ့စည်းကိုချနိုင်ဖို့ အရေးကြီးဆုံးပါဘဲ။ ‘စိတ်ရှည်သည်းခံမှု’ သည်လည်း အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ရှိရှိသမျှကိစ္စတိုင်းကို စိတ်ထိခိုက်လွယ်နေပြီး အချိန်တိုင်းပြဿနာတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ရေရှည်ဘယ်လိုမှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အပေးအယူမျှနေမှဖြစ်နေမှာနော်။ တစ်ဖက်ထဲကလဲအမြဲသည်းခံမနေနိုင်သလို တစ်ဖက်ကလဲအမြဲအနိုင်ယူမနေလို့မရပါဘူး။ ယူနေသည့်တိုင် ဘယ်အချိန်လောက်ထိ သူပေးနိုင်မှာလဲ? ဒါကပျက်စီးခြင်းရဲ့အစပါ။
ဘယ်အရာမဆိုသူ့အပေါ်အားကိုးလွန်းတာ၊ မှီခိုလွန်းတာကလဲ နှစ်ယောက်သားအဆင်မပြေကြတဲ့ အကြောင်းအရင်းထဲက တစ်ခုပါဘဲ။ ဘယ်သူမဆို ကိုယ့်လမ်းကို ကိုယ်တိုင်ပဲလျှောက်ရမှာပါ။ အဲ့ဒါကို ‘သူမပါရင် သမီးကဘယ်မှမသွားတတ်ဘူးလေ’ ဆိုတာမျိုးကလုံးဝမဖြစ်သင့်ပါဘူးနော်။ နောက်တစ်ခု ကိုယ်ကမှီခိုတဲ့အပြင် သူ့ကိုပါသွားသွားပြီး ‘ငါမပါရင် နင်လည်း ဘယ်မှမသွားရဘူး’ ဆိုတာမျိုးက အရမ်းနည်းလမ်းမကျတဲ့ ပညတ်ချက်တစ်ခုပါ။ လူတိုင်းမှာ ‘ကိုယ်ပိုင်အချိန်’ ဆိုတာ ရှိကိုရှိသင့်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကိစ္စတွေမှာ အရမ်းကြီး တင်းကြပ်လွန်းရင် ပိုလွတ်ထွက်တာမို့ ခပ်လျော့လျော့လေးပဲ ထားလိုက်ပါ။ လူနှစ်ယောက် ချစ်နေကြချိန်မှာ လိင်ခွဲခြားတာမျိုးမလုပ်ဘဲ သူလည်းလူ၊ ကိုယ်လည်းလူဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ချစ်ကြရင် အရာရာပိုအဆင်ပြေနေမှာပါ။
နောက်တစ်ခုက အတိတ်ကိစ္စပေါ့နော်။ လူတိုင်းမှာအတိတ်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ကောင်းတဲ့အတိတ်ရော၊ ဆိုးတဲ့အတိတ်ရောပေါ့။ ပြန်လှန်လို့ကောင်းတာ စာအုပ်ပဲရှိပါတယ်။ အတိတ်မှာ သူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကို ပြန်ပြန်လှန်ပြီး ပြဿနာရှာတဲ့အခါ ဘယ်သူကမှသည်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ ကိုယ်ချစ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ကို အဆုံးရှုံးခံချင်ကြလားယောင်းတို့? လက်ရှိမှာ သူကကိုယ့်ကိုချစ်နေတဲ့လူ၊ ကိုယ့်ချစ်သူဖြစ်နေပြီမို့ အရာအားလုံးကို ဒီလောက်နဲ့ပဲ အတွေးရပ်လိုက်ပါ။ အတွေးလွန်တာမျိုးတွေ မဖြစ်ကြပါနဲ့လို့။ သူ့ကို ကိုယ်ချင်းစာပါ။ ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်ရင်လဲ မြုံမထားဘဲထုတ်ပြောပါ။ သူ့မှာလဲ ဆဋ္ဌမအာရုံ ရှိနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက် ကိုယ်ဘာဖြစ်နေလဲသူမသိနိုင်တာမို့ ဘယ်ကိစ္စမဆိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသာပြောပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ သူ့ကိုကိုယ့်ရဲ့ ယောကျာ်းဘာညာစသည်ဖြင့်မသတ်မှတ်ဘဲ ‘Partner’ ဆိုတဲ့လက်တွဲဖော်အနေနဲ့သတ်မှတ်ဖို့ပါ။ ဆိုးတိုင်ပင်၊ ကောင်းတိုင်ပင်နဲ့ အရာရာတိုင်း အသင့်ရှိနေစေနေမယ်ဆို လုံလောက်ပါပြီ။ တစ်ချို့ ‘ငါကမိန်းကလေးမို့ သူနားလည်ပေးရမှာပေါ့’ ဆိုတဲ့အတွေးကိုဖျောက်ပစ်ပါ။ မိန်းကလေးမို့ ကာကွယ်ခံရမယ့် အခွင့်အရေးထက် ဆိုးကျိုးကပိုများနေတာမို့ ဘယ်အရာမဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ပဲမြင်ပြီး တည်ဆောက်ပါ။ ပြဿနာတွေကိုလဲ ရန်လိုနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အေးအေးဆေးဆေး တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြေရှင်းပါ။ ပျော်ရွှင်တဲ့နှစ်သားတစ်ကိုယ်ဘဝလေးတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေ။
Credit: For Her Myanmar
ကရင်တို့နှစ်စဉ် အိမ်ပြန်လေ့ရှိတဲ့ချည်ဖြူဖွဲ့ မင်္ဂလာပွဲ
လမ်းမပေါ်က ကမ္ဘာကျော် ရုပ်ရှင်မင်းသား သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ဦးရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိ